Somaliland: 13 November: Doorasho Ama Dooriso | Araweelo News Network | Araweelo News Network
Somaliland haatan waa 26 jir, aqoonsi la’aanta ka sokow, miisaankeedu dheelli ku qaan gaadhay. Wax wada lahaansho dhab ah iyo cadaalad loo siman yahay oo qofba quruskiisa ka siisa waxa la wada leeyahay, waxay weli ka dhigan tahay su’aal aan jawaabteedii la helin, balse baadidoonkeeda lagu jiro oo aan laga quusan .
Dhacdooyinkii todobaddii sano ee u dambeeyay maamul ahaan dhacayay waxay tusaale fudud u noqon karraan heerka hooseeya ee ku dhaqanka sharcigu gaadhsiisan yahay. Waxay tilmaan u yihiin heerka badheedhka ah ee uu marayo musuqa, dhaca iyo boobka hantida umaddu.
Haddii ficilka qaloocani is qarin waayo oo uu badheedh banaanka ugu soo baxo fool xumo ka wayni ma jirto. Markuu xad dhaaf iyo isugu faan noqdo ee aad diidi waydona gobanimo iyo qurux inaad u qaadataa waa suuragal sida eeggaba muuqata ee xaragadda iyo dhaadashada loogu arko.
Qof kasta oo la socda wacyiga siyaasadeed ee xilligan taagan iyo muuqaalka Somaliland dal ahaan leedahay guddo iyo dibadba, wuu ku taagan yahay ladhka doorashada soo socotaa. Mid kastaaba wuxuu ku odhanayaa, ‘waa doorasho adag oo welwelka laga qabaa haatanba saameeyo dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo nolloleed ee dadka iyo dalka. Dad badan baa shaqooyinkii ay nolol maalmeedka kala soo bixi jireen istaageen sida dhismaha, dad badan baa lacagtii ay hawlaha ugu talogaleen jeebka ku hakiyay oo ka war dhawraya siday wax u dhacaan maalintaa.
Waxyaabo badan ayaa sal u ah shakiga laga qabo waxay soo waddo maalintaa 13.Nov.2017. Qodobadda ugu muhiimsan ee faalleeyayaashu tilmaamayaan waxa kow ka ah; ku dhaqankii sharciga iyo kala dambayntii nidaamka dawliga ah oo hoos u dhacay, taasina ay sababtay la xisaabtan la’aan loo arko inay horseeday in masuul kastaaba siduu doono u socdo. Kala qubashada iyo kala xidhiidh furashadaa waxa loo sibir saaraa, awooddii fulinta ee masuuliyadda Madaxweynaha oo u muuqata mid aan urursanayn ee ku baahday gacmo kale oo aan loo doorran. Hawlgudashada Madaxweynaha iyo in gacmo kale awooddiisii ku shaqeeyaan in badan baa jiritaankeeda laga hadlay, Madaxtooyaduna jawaabo ka bixinaysay, balse Somalilandna dad ahaan waxay ixtiraameen hogaamiyahooda waayeelka ah, dhalliil kasta oo jirtana samir bay kaga jawaabeen.